787-800 ingxaki pack mega.
umbuzo 787-800 ingxaki pack mega.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #632 by ricsmi
Molo konke, ndiye nje kutshanje baqalisa ukudlala FSX SE nokukhathalelwa ngokwenene.
Ndiye efakwe nje TDS 787-800 pack mega kwaye ingxaki kuphela i babe nalo kukuba akukho nanye-moya iqhosha kunye zinamaqhina basebenza VC, ndiya kubaleka yonke moya yam VC yaye oku ebulala lo moya kum njengoko i into engenako ukumelana moya 2d.
Naziphi na guys imibono?
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #633 by Gh0stRider203
kakuhle ukusukela oko a 2 injini intaka, ndize okunene ndiyazi VC ungasebenzisa. kuza kufuneka ukuba khuphela moya ezongezelelweyo, kodwa iyakuba kwamnceda
oku Ndiza kukubonisa ukuba yokutshintshana njani VC
le VC kulo mntu kunokuba kamnandi. Andazi ngenene ukusebenzisa yona kodwa lisebenza
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: ricsmi
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #634 by ricsmi
Bulelani ok Ndiza kuthatha wakhangela, ndinesinye ingxaki, i nje waphawula ukuba le mbono umphandle kukho ilori uthengisa enkulu eziqhotyoshelwe moya.
Njani i balahle loo njengoko ibonakala bubudenge, clip nje ngendlela emiselweyo omnye.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #635 by Gh0stRider203
kuqala VC, NGOKU stowaways? kubonakala ngathi awukwazi ukubamba ikhefu! HLEKA KAKHULU
ukuba andiqinisekanga ngayo, ngokunyaniseka. Andiqondi kubhabha i 787 (i 772LR inomthamo engcono kunye noluhlu). into KUPHELA mna ndicebisa ukuba bakhangele phantsi panels ukubona ukuba kukho i window eluncedo. Ndiyazi ezinye iintaka Project Open Sky oko.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #640 by ricsmi
Emva kokufunda ngokusebenzisa ndizifunde ithi kukho panel eluncedo ukuba uyakwazi ukucima indlela Ukruthakruthwano, indawo yolawulo bekumele ukuba ukubonisa emva ethile nokucofa Ctrl + 7 kodwa isnt ayasebenza nokuba ngokungekho.
Naziphi abavukeli imibono?